ခရီးထွက်တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရေဆာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲ ပြသနာတက်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဝိုင်းပြောခဲ့ကြတဲ့ ထွန်းထွန်း နဲ့ ကျော်ကျော်ဗို …. – Shwe Thoon 8 Online Media
ခရီးထွက်တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ရေဆာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲ ပြသနာတက်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းကို ဝိုင်းပြောခဲ့ကြတဲ့ ထွန်းထွန်း နဲ့ ကျော်ကျော်ဗို ….
August 2, 2020 August 2, 2020 shwe0Comments
မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့ကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ နေရာတစ်နေရာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့က အနုပညာအလုပ်တွေကို အတူတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်ကြသလို အပြင်မှာလည်း
ညီအစ်ကိုလို၊ သူငယ်ချင်းလို ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး တပူးပူး တတွဲတွဲရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း မင်းမော်ကွန်းတို့ ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့
ထွန်းထွန်းတို့က ရှမ်းပြည်နယ်အနှံ့ကို ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်နဲ့ ရောက်ရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပဲ ပြဿနာတက်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့အကြောင်းကတော့ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းပြောသလို အခုလိုပဲ ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွ ပြောလာပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ နေပူပူမှာ
ဆိုင်ကယ်ကြီးတစ်စီးနဲ့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေရလို့ ရေခဏခဏဆာတဲ့ ပြဿနာတက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့ကတော့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့ နေရာတစ်နေရာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့က အနုပညာအလုပ်တွေကို အတူတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်ကြသလို အပြင်မှာလည်း
ညီအစ်ကိုလို၊ သူငယ်ချင်းလို ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး တပူးပူး တတွဲတွဲရှိကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း မင်းမော်ကွန်းတို့ ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်အားပေးကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့
ထွန်းထွန်းတို့က ရှမ်းပြည်နယ်အနှံ့ကို ရိုက်ကူးရေးအစီအစဉ်နဲ့ ရောက်ရှိနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခရီးသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံး ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပဲ ပြဿနာတက်နေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့အကြောင်းကတော့ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းပြောသလို အခုလိုပဲ ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွ ပြောလာပါတယ်။ မင်းမော်ကွန်းကတော့ နေပူပူမှာ
ဆိုင်ကယ်ကြီးတစ်စီးနဲ့ ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေရလို့ ရေခဏခဏဆာတဲ့ ပြဿနာတက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း မင်းမော်ကွန်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ထွန်းထွန်းတို့ ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး သဘောကျကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source : Aung Min Naing’s Facebook
← အဖေဖြစ်သူ ပင်ပန်းမှာစိုးလို့ မနက်(၅)နာရီထပြီး ထောပတ်ထမင်းတွေရောင်းဖို့ ကူညီပေးနေတဲ့ ညီနန္ဒရဲ့ သမီးလေး ….
….ထီပေါက်တဲ့ သိန်း ၅၀၀ လုံးကို လှူပစ်မယ့် အွန်လိုင်းဆယ်လီကြီး …. →
သမိုင်းဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး စန်းသော်သော် …
သွေးတိုးရောဂါကို လက်တွေ့ပျောက်ခဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ဆေးနည်းလေးပါ …
” သူမရဲ့ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ကြေးအမျိုးမျိုးနဲ့ဝေဖန်မှုမြင့်တက်နေတဲ့ နေခြည်ဦးညီမလေး စိမ်းလဲ့ရတနာ”..
“လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ စီနီယာအမဖြစ်သူ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့တွေ့ဆုံတုန်း အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဓာတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့နန်းဆုရတီစိုး” …
” တစ်နေ့တခြား အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင် တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှလာတဲ့ မေမေပိုးအိအိခန့်” ….
Copyright © 2020 Shwe Thoon 8 Online Media. All rights reserved.